Gadiid Al-Shabaab Ay Qaraxyo ku Diyaarinayeen Oo la burburiyay – Al-Hurriyah
Wararka laga helayo gobalka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka ay howlagalo ka sameeyeen duleedka Buulo-Gaduud oo Ka Tirsan gobalka jubbada hoose islamarkaasina ay ku burburiyeen gawaari alshabaab ay ku diyaari nayeen waxyaabaha qarxa.
Saraakiisha ciidanka ee halkaasi ku sugan ayaa sheegay in ay ka war heleen goobta al-shaabaab qaraxyada ku diyaarinayeen ,kadibna weerar ay ku qaadeen .
Taliyaha Guutadan 16aad ee militeriga soomaaliya Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik maalin Oo la hadlay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa ka warbixiyay howlgalkaasi , isaga oo sheegay in ay cagta mariyeen gaadiid qaraxyo ay ku diyaarinayeen dagaaliyahanada xarakada Al-shabaab .
Taliyaha oo sii hadlayay ayaa tilmaamay in gawaarida ay burburiyeen ee alshabaab qarxayada ku diyaarinayeen in ay haayeen kuwa xamuulka qaada ,isga oo in taasi ku daray in ay goobta ku dileen xubno ka tirsan al-shabaabkii ku sugnaa goobtaasi
Xubnaha goobta lagau dilay ee ka tirsanaa al-shabaab ayaa waxa uu taliye ismaaciil ku sheegay in tiradooda ay gaareysay ilaa iyo 30 dagaalame sida hadalka uu u dhigay .
Dagaalada dhaxmara intabadan al-shabaab iyo ciidanka dowlada ayaa waxaa guula ka kala sheegta labada dhinac , inkastoo ay aad u adag tahay in la helo ilo ka madaxbanaan labada dhinac oo xaqiijiya khasaaraha rasmiga ah .
RW:Kheyre Oo Amaro Culus faray Ganacsada Somaaliyeed
Gen. Cabdi Jamac cabdulle xabeeb oo ka tirsan saraakiisha amniga Galmudug iyo masuulkiyiin…
Muqdisho December 06, 2019 (Al-Hurriyah News): Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Mahad…
Labo waziir oo kamida kuwa ugu muhiimsan xukuumada kheyre oo lagu wado in maantay ay hortagaan golaha shacabka
Waziirada amniga iyo duulista hawada ayaa lagu wadaa in maantay ay hor tagaan baarlamanka fadaraalka…
Alle ha u naxariistee waxaa Magaalada London ee dalka Ingiriiska ku dhintay fannaan laxamiiste abwaan Maxamuud Ismaaciil Xuseen Xudaydi, oo loo yaqaannay Boqorkii Cuudka maadaama uu ku xeeldheera tumiddiisa. Allah ha naxariistee Maalmihii u danbeeyey Xudaydi…